China Vietnam- MIC Ọrụ na Ule | MCM
IetVietnam MIC Asambodo
Okirikiri 42/2016 / TT-BTTTT kwuru na batrị arụnyere na ekwentị mkpanaaka, mbadamba na akwụkwọ edetu anaghị ekwe ka ebupụ ha Vietnam belụsọ ma edobere ha DoC site na Oct.1,2016. A ga-achọ DoC ka ịnye mgbe itinye ntinye akwụkwọ maka ụdị ngwaahịa (ekwentị mkpanaaka, mbadamba na akwụkwọ ndetu).
MIC weputara okirikiri 04/2018 / TT-BTTTT na Mee, 2018 nke kwuru na ọ nweghị ihe ọzọ IEC 62133: 2012 nke ụlọ ọrụ nyocha nke mba ofesi nabatara na July 1, 2018. Nnwale mpaghara dị mkpa mgbe ị na-achọ akwụkwọ ADoC.
QCVN101 ： 2016 / BTTTT （na-ezo aka IEC 62133 ： 2012)
Gọọmentị Vietnamese nyere iwu ọhụrụ Nke 74/2018 / ND-CP na Mee 15, 2018 iji kwado na ụdị ngwaahịa abụọ a batara na Vietnam nọ n'okpuru ngwa PQIR (Ndebanye aha Nnyocha Ngwaahịa) mgbe a na-ebubata Vietnam.
Dabere na iwu a, Mịnịstrị nke Ozi na Nkwukọrịta (MIC) nke Vietnam wepụtara akwụkwọ gọọmentị 2305 / BTTTT-CVT na July 1, 2018, na-ekwupụta na ngwaahịa ndị dị n'okpuru ya (gụnyere batrị) ga-etinye aka maka PQIR mgbe a na-ebubata ha banye Vietnam. A ga-edozi SDoC iji mezue usoro mmezi omenala. Thebọchị ọrụ ịbanye na ike nke iwu a bụ Ọgọstụ 10, 2018. PQIR dị maka otu mbubata na Vietnam, ya bụ, oge ọ bụla onye mbubata na-ebubata ngwaahịa, ọ ga-etinye akwụkwọ maka PQIR (nyocha batch) + SDoC.
Agbanyeghị, maka ndị na-ebubata ngwa ngwa ibubata ngwa ahịa na-enweghị SDOC, VNTA ga-enyocha PQIR nwa oge ma kwado mmezi omenala. Mana ndị na-ebubata ngwaahịa ga-edozi SDoC na VNTA iji mezue usoro mkpochapụ omenala niile n'ime ụbọchị iri na ise na-arụ ọrụ. (VNTA agakwaghị ewepụta ADOC gara aga nke metụtara naanị ndị nrụpụta mpaghara Vietnam)
● Onye nkesa nke ozi ohuru
MCM nwere njikọ chiri anya na MIC bụ onye na -ekọ akụkọ banyere Vietnam kacha ọhụrụ.
● Onye na-ahụ maka ụlọ nyocha nyocha batrị na gọọmentị mpaghara
E guzobere laabu nyocha batrị na 2017 site n'aka gọọmentị Vietnam na MCM, nke bụ naanị ụlọ nyocha mpaghara nwere asambodo zuru oke nke QCVN101: 2016. Na MCM si otú a bụrụ naanị otu ụlọ ọrụ nke ụlọ nyocha a na Mainland China, Hong Kong, Macau na Taiwan.
● Suggester nke Vietnam asambodo asambodo nke ngwaahịa batrị
Thelọ nyocha ụlọ ọrụ nke MCM guzobere bụ maka nyocha ngwaahịa na nkwupụta ngwaahịa ebe MIC bụ ihe akwụghachi ụgwọ maka ịnye iwu nyocha na iwu. Uzo abuo a na-ekwenye nke oma iji kwalite mmepe nke ule batrị na asambodo na Vietnam.
● Ọrụ Otu Ngalaba Agency
MCM, ụlọ ọrụ na-egbochi otu nkwụsị, na-enye nnwale, asambodo na ọrụ ndị nnọchi anya maka ndị ahịa.
Nke gara aga: India - CRS
Osote: Malaysia- SIRIM
Batrị Vietnam Mic
Batrị Vietnam Pqir
Ahịa Asambodo Vietnam
Usoro asambodo Vietnam
Ọrụ Asambodo Vietnam
Akwụkwọ Vietnam Mic
Vietnam Mic Asambodo
Vietnam Mic Asambodo Ahịa
Vietnam Mic Asambodo Usoro
Vietnam Mic Asambodo Ọrụ
Vietnam Mic Lead Oge
Nkwupụta Vietnam Mic
Akuko Vietnam Mic
Vietnam Mic chọrọ
Nkọwapụta Vietnam Mic
Vietnam Mic Nka na ụzụ chọrọ
Vietnam Mic Test Ihe
Usoro Ule Vietnam Mic
Nkwupụta Ule Vietnam Mic
Vietnam Mic Ule nyocha
Vietnam Mic Testing Ahịa
Oge Vietnam Mic
Ahịa Ule Vietnam
Ọrụ Ule Vietnam